Ao amin'ny firenena samy hafa, Mety tsy hitovy ny vidin'ny bitcoin - Blockchain News
Nahoana no samy hafa firenena eo amin'ny vidin-javatra ho an'ny bitcoin Mety tsy hitovy
Arakaraka ny firenena sy ny crypto-fifanakalozana tahan'ny, ny vola lany isam-pananana crypto Mety tsy hitovy. Efa nandinika lafin-javatra maro izay misy fiantraikany ny fananganana ny vidin-javatra eo amin'ny tsena crypto, sy ny fomba izy ireo mifandray amin'ny toerana ara-jeografika ny mpamatsy ny cryptocurrency.
Voalohany indrindra, dia tsara ny mandinika ny zava-misy fa tsy misy tsy mbola ankapobeny dia ekena noho ny fampiasana Ohatra cryptocurrency. Ho an'ny sasany, ny antony fampiasam-bola dia ny finoana fa noho ny cryptocurrency, Miandry ny teknolojia blockchain mitombo aingana. ho an'ny hafa, dia ny finoana fa ireo BitCoins izay nividy izy ireo amin'izao fotoana izao amin'ny hoavy dia ho any be tinady eo amin'ny fiainana andavanandro. Fa ny sisa, ary tena mety indrindra, ny antony hividianana bitcoin dia ny faniriana hanao tombony.
koa, fantatsika rehetra fa bitcoin tsy manana milamina vidiny, dia ny décentralisées cryptocurrency ny toe-karena eran-nomerika izay tsy tohanan'ny misy-pananana, dia tsy nanome vola akory va Fiat, ary tsy isan 'izay toe-' izao tontolo izao. Na izany aza, toy ny mpanjifa indrindra entana, ny bitcoin vidiny miforona eo amin'ny fototry ny tolotra sy ny tinady ho azy. Raha lazaina amin'ny fomba hafa, ny vidin-ny eran-cryptocurrency voalohany dia nisy mandanjalanja eo amin'ny vidiny natolotry ny mpivarotra sy ny mpividy inona no vonona ny hahafoy zavatra.
Misy ny firenena izay ara-barotra amin'ny cryptocurrencies voarara, ary bitcoin ihany no azo vidina mivantana avy amin'ny mpivarotra-mpamatsy, ary tsy crypto-fifanakalozana fifanakalozana. Ohatra, araka ny interdiction ny fifanakalozana ao Shina, ny boky ny fifanakalozana eo amin'ny p2p plattform ny LocalBitcoins efa nitombo be. Any amin'ny tany maro, mba hividy bitcoin, dia mila manana kaonty banky sy ny maha-karatra. Ohatra, Korea Atsimo ny ara-bola dia fomba ofisialy regulator nandrara tsy fantatra anarana varotra, ankehitriny mpivarotra dia tsy maintsy misoratra anarana indray virtoaly tantara an-tantara amin'ny tena anarana.
Noho ny didy amam-pitsipika faneriterena, mpivarotra bitcoin toy izany p2p plattforms toy ny LocalBitcoins dia afaka hametraka ny inflated vidiny sy antoka fa mpividy no handoa izany. “mpamatsy” ny bitcoin matetika no aseho amin'ny endrika orinasa izay hamandrika maro BitCoins sy ny Fiat-bola, ary afaka hibaiko ny teny amin'ny kely mpividy, indrindra raha ny faritra ao lehibe fangatahana cryptocurrencies. Ohatra, Korea Atsimo bitcoin dia amin'ny eo ho eo $ 400 lafo kokoa noho ny tamin'ny Etazonia, ary ny fahasamihafana amidy sy ny fividianana dia afaka ny ho avy $ 1800 ny $ 3000. ao India, ny bitcoin mpivarotra manome vola amin'ny vidiny 20% ambony kokoa noho izay nametraka ao amin'ny tsena Amerikana. Ny fahasamihafana eo amin'ny saran'ny ny fivarotana sy ny fividianana ny bitcoin ao India dia mikasika ny $ 1000. ao Shina, ny bitcoin tahan'ny dia $ 100 ambony kokoa noho ny any Etazonia, ary ny vola dia nivarotra sy nividy tamin'ny fahasamihafana ny manodidina $ 500. Mandritra izany fotoana izany, ao Rosia ny bitcoin tahan'ny dia $ 100 ary eo ho eo ambany mitovy ny tahan'ny cryptocurrency ao amin'ny EU firenena, ary ny fahasamihafana eo amin'ny fivarotana dia asao sy ny tolotra momba ny mety ho $ 400. Na dia eo aza izany fahasamihafana amin'ny vidiny, mpivarotra foana mpividy izay tsy manana safidy hafa raha te-hahazo eo amin'izao tontolo izao ny Crypto.
Ny crypto tsena dia mbola tena tanora ary tsy misy olona afaka mahita mialoha ny zavatra toerana ny farany ny bitcoin dia na inona ny hoavin'ny orinasa ity dia hitovy. Ao amin'io tsena ankehitriny dia misy maro ny mpilalao izay hanenjika iray tanjona – mba ho matiantoka. Ary izany dia midika fa ao anatin'ny iray andro mpilalao toy izany dia handao ny tsena, nitondra azy ireo ny nahazo vola. Fa amin'ny tranga ity, misy fototra tombontsoa – Rehefa mitranga izany, misaina fangatahana dia hampihena ny vidiny cryptocurrencies rehetra ho mitovy lenta amin'ny firenena rehetra, sy ny tsena. Mandraka nitranga, miezaka fotsiny mba hankafy izay mitranga, nitarika ny korontana ao amin'ny ankehitriny.
Mety tsy hitovy Bitcoin Prices
Previous Post:Teo aloha ny Blockstream mpandraharaha mamorona ny supercomputer amin'ny blockchain
Next Post:Coinbase fizahan-toetra farany dia manomboka Segwit
Febroary 6, 2018 amin'ny 8:25 AM
Mey 11, 2018 amin'ny 6:47 AM
Jona 26, 2018 amin'ny 6:06 AM